Tag: brand kuvimbika | Martech Zone
Tag: brand kuvimbika
Pese pandinotaura nezve brand brand, ini ndinowanzo govana yangu nyaya kana ndichitenga mota dzangu. Kwemakore anopfuura gumi, ndaive ndakavimbika kuna Ford. Ini ndaida masitayera, mhando, kusimba, uye kukosha kwekutengesa zvakare kwemotokari yega yega nerori yandakatenga kuFord. Asi izvo zvese zvakachinja makore gumi apfuura mota yangu payakayeuka. Pese paitonhora tembiricha pazasi pechando uye hunyoro hwaive hwakakwirira, madhoo emota yangu aiita
Zvemagariro Ongororo uye Revenue
China, August 1, 2013 NeChishanu, Nyamavhuvhu 2, 2013 Douglas Karr
Sezvo nekushambadzira kwakawanda uye kutengesa, kubatanidza iwo madhira dzimwe nguva kwakaoma pakati pezviitiko izvo vatengi vanotora uye chaiko poindi yekutenga. Pasina mubvunzo, zvakadaro, kuti pane kuwirirana pakati pezvekudyidzana uye maitiro ekutenga. MaCMO ari kutanga kuwana tsvagurudzo yekuti pane causation zvakare… zvinonakidza zvinhu! Iyi infographic kubva kuSocialAnnex, yemagariro enhau kushambadzira chikuva cheecommerce, inopa zvimwe zvakakosha zvakawanikwa. Inobatsira ruzivo rwevatengi, ingave inotungamira, huwandu hwevanhu, manzwiro, mutengi
Yekutanga Nongedzo kune Zvemukati Kushambadzira
China, May 16, 2013 Douglas Karr
Kuvimba nechiremera… ndiwo chete mazwi maviri ari musimboti kuchirongwa chekushambadzira zvemukati, mumaonero angu. Sezvo mabhizimusi nevatengi vanotarisa pamhepo kutsvaga zvigadzirwa zvako nemasevhisi, vangangove vatove nesarudzo yekutenga. Mubvunzo ndewokuti vachatenga kubva kwauri here kana kwete. Zvemukati kushambadzira ndiwo mukana wekuti iwe ugadzire iko kuvimba uye chiremera pamhepo. Kupeta zvese zviwanikwa uye maitiro akatenderedza zvemukati
Chiyero: Kuchengeta Dhata muBhokisi!
Chipiri, Gunyana 20, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Izvi zvinogona kuve zvishoma zvegeeky, techy, post asi ini ndaifanira kungoigovana newe. Chimwe chezvinangwa zve Martech Zone iri kupa vanhu ruzivo nezve tekinoroji pamwe nekushambadzira - saka iwe uchaona zvakanakisa zvinyorwa pane tekinoroji mumusanganiswa nguva nenguva. Kana iyi posvo ikatanga kuverenga senge Klingon, ingoipfuudza kune yako CIO. Ndine chokwadi chekuti achafadzwa! Izvi